Vakuru Vemhando Vagadziri hotsell nyowani dhizaini kukwira shangu kubva kumurume
Mwaka: kudonha uye chando
Chakaita zvokugadzirwa pu yokumusoro
yechinyakare inofamba yemachira kukwira inofema yekunze shangu dzevarume
Mwaka mutsva uripo 3 ruvara musanganiswa dhizaini.
Chakaita zvokugadzirwa pu, unofema mesh kumusoro
Kunogara rabha bedzi.
Yekupedzisira Dhizaina Brand Rakagadziriswa Inogadzikana Inonyaradza Flyknitting Sock Sneakers yeVarume
Yakakura forefoot uye yakakwira furo stack pamwe nehunyanzvi FlyKnit yekumusoro inopa yakasununguka kufamba. Kuvhara kwetambo-kumusoro kunosunga tambo dzakatenderedza yepedyo kukwana. Bootie-dhizaini kora uye rurimi zvinopa nyaradzo kutenderedza chitsitsinho chako. Nyore pa-uye-yekudhonza tabu pane iyo kora. Inobviswa insole. React midsole cushioning inodzivisa kumanikidza uye inodzosera simba nhanho yega yega uchishandisa mashoma ezve chinhu kune anoteerera uye akatsetseka kukwira panguva yekumhanya. Yakawedzera rabha pane yekunze inopa traction uye durabilit ...
Amazon yepamusoro mutengesi chena tsika varume shangu sneaker rakadhindwa dema yeezy shangu kune varume
Wira mune yakajairwa tsika yekudzidziswa kwezuva nezuva uye kusimbisa muviri varairidzi. Mesh uye flyknit yekumusoro ine quilted pateni yekufema. Yetsika tambo-up kuvharwa neyakavharirwa pasi chitsitsinho tambo kuti uchengetedze rutsoka rwese munzvimbo panguva yekudzidziswa kwakanyanya uye mahara ehuremu zvikamu. Rakavezwa rurimi uye kora. Bootie kuvaka uye kudhonza tebhu pachitsitsinho kuti ikurumidze uye nyore kukwana uye kunzwa. Anofema mesh lining uye yakaomeswa insole. Foam midsole inopa yakasikwa kunzwa. Rabha outsole ine flex groove ...
2020 inopisa Tengesa chimiro Yakarukwa yepamusoro fashoni sneakers Classic Brand varume shangu dzemitambo shangu Inofema Yeezy shangu
Mhanya pamakumbo mushure memakumbo mukunyaradza nerubatsiro rwe flyknitting mutambo shangu yevarume. Kusimudzira: Kureruka, kupindura mhinduro. Lace-up kuvharwa. Runyoro kora uye rurimi zvinopa nyaradzo kutenderedza chitsitsinho chako. Tambo yekutambanudza inopa sock-senge kunzwa. Inobviswa insole. React kukanda kunodzivisa kumanikidza uye kunodzosera simba nhanho dzese. Hafu shefu inopa kugadzikana sekumhanya kwako. Rubber outsole inopa traction. Chigadzirwa Ruzivo Chinyorwa Nha.: 5030 Chigadzirwa zita: inopisa tengesa yakasarudzika yepamusoro yakarukwa snea ...
Nyoro Inofurika Fashoni Sneakers Sport Shoes YeVarume nevakadzi
Svetuka uye jive nzira yako kuenda kumutambo poindi neanoteerera sneaker shangu. Iyo yakakwana bhalansi pakati pekureruka kuita uye kusimba nepo outsole inopa yekupedzisira mune yakakwira-kupfeka kugadzikana. Flexible flyknit yepamusoro inopa yakaenzana kukwana uye kunzwa. Seamless yakatambanudzwa-mesh bootee kuvaka kweiri nani kukwana uye kusingaenzanisirwe nyaradzo. Lace-up kuvharwa. Anofema textile lining. Yakagadziriswa foam insole. Yakazara-kureba EVA chete zvinopa zvinogara, zvisingaremi kutsigira nekusimba. Chigadzirwa Ruzivo A ...
Yakasarudzika yakachipa yemitambo shangu yemusango inomhanya shangu yechinyakare mutambo sneakers
Zvekureruka, kuita-padare mashandiro izvo hazvipire kugadzikana iwe kwaunoda kwakakura kudzidziswa uye kukwikwidza. Knit sneakers kugadzira yakakwira-yakasimba mukumusoro iyo inochengetedza yakareruka, inofema kuita. Lace-up kuvharwa. Anofema machira sockliner. Yakagadziriswa foam insole. Yakazara-kureba polyurethane midsole inopa yakatsiga rebound yekuteerera inoteedzera. Rubber outsole inopa iyo yekupedzisira mukukwirira-kupfeka kugadzikana. Chigadzirwa Ruzivo Chinyorwa Nha.: 5027 Chigadzirwa zita: ...
2020 matsva evarume emitambo, shangu dzevazhinji dzevarume shangu dzemitambo
Nyorazve nhaka yako munzira kana pazuva kupfeka shangu nyowani dzekumhanya. Akafanotungamira: Nhoroondo React. Rutsigiro Rudzi: Kwazvakarerekera. Kusimudzira: Kureruka, kupindura mhinduro. Pamusoro: Mugwagwa. Yakakura kumberi tsoka uye yakanyanya kusununguka yepamusoro inopa kukwira kwakanyanya. Yakareruka, inofema mesh kumusoro. Lace-up kuvharwa. Yakapetwa kora uye rurimi zvinopa nyaradzo kutenderedza chitsitsinho chako. Nyore pa-uye-yekudhonza tabu pane iyo kora. Inobviswa insole. Lightweight phylon bedzi. Chigadzirwa Ruzivo Chinyorwa Nha.: 5028 Pr ...
fekitori Wholesale murume kukwira shangu, inopisa kutengesa nyowani shangu, mutambo shangu varume
Gadzirira zuva rinonakidza-rizere munzira munzira yeshangu! Faux dehwe uye mesh kumusoro. Lace-up kuvharwa. Inodzivirira rabha chigunwe chivharo. Chitsitsinho chinodhonza chiuno. Rakavezwa rurimi uye kora. Anofema mesh lining inopa yakakura mukati-shangu kunzwa. EVA midsole inopa kugadzikana kwakadzikama. Rubber outsole inounza yakasimba-kuita mukurumari, kudzikama, uye traction Chigadzirwa Ruzivo Chinyorwa Nha.:
Yemazuva ano Yakavimbika Dhizaini Sport Kunze Shangu dzeVarume Athletic Shoes
Iyo yakavimbika yepamusoro dhizaini uye yepamusoro outsole kubata kwenzira yekukwira shangu ichaita shuwa kuti mamiriro ekunze akashata haatombodzora pasi ako ekufamba marongero. Yakaderera-mbiri kukwikwidza shangu dzekufamba zvakanaka. Yakareba yakavharwa mesh yepamusoro ine synthetic overlays. Synthetic chigunwe chivharo uye chitsitsinho chekuwedzera kwekudzivirira abrasion. Chinyakare resi-up dhizaini yeanosarudzwa kukwana. Anofema machira machira ekuwedzera nyaradzo yemukati. Lightweight midsole yekunyaradza kwenguva refu, kukwidziridzwa kwepamusoro, uye simba rakakwira kudzoka. L ...